अदृश्य केटी: धेरै युवाहरु को खूनी वास्तविकता आज | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | जीवनी, युवा साहित्य, कालो उपन्यास
नीलो जीन्स वाक्यांश
अदृश्य केटी युवा रोमान्टिक साहित्य लेखक फ्रान्सिस्को डे पाउला फर्नांडीज गोंजालेज, ब्लू जीन्स को रूप मा परिचित एक उपन्यास हो। काम अप्रिल ५, २०१ published प्रकाशित भएको थियो, यसको साथ लेखक विधा मा उद्यम गरियो रोमाञ्चक र पहिलो किताब को एक homonymous त्रयी शुरू भयो। यो पुलिस अदालत साजिश मा, एक किशोरी केटी उनको स्कूल मा हत्या भएको छ, रहस्यमय र संदिग्धहरु को एक ठाउँ।
नीलो जीन्स एक कहानी उत्पादन गरे जसमा युवाहरु नायक थिए, starkly कठिनाईहरु उनीहरु लाई सामना गरीरहेछन् र उनीहरु सामान्यतया उनीहरु संग कसरी व्यवहार गर्छन्। यसको लागी, धम्की, सामाजिक मिडिया, नक्कली समाचार, र यौन प्राथमिकताहरु: जस्तै चिन्ता को मुद्दाहरु मा छुन्छ। लेखक को उद्देश्य युवाहरु वर्तमान मा अनुभव गरीरहेछन् कि वास्तविकता मा प्रतिबिम्बित गर्न को लागी हो।
1 सारांश अदृश्य केटी
1.1 सबै सुरु हुन्छ
1.2 अप्रत्याशित मुठभेड
1.3 अन्तिम परीक्षा
1.4 रोचक कल
1.5 भयानक खोज
2 विश्लेषण अदृश्य केटी
2.2.1 अरोरा रियोस
2.2.2 जुलिया प्लाजा
2.2.4 अन्य पात्रहरू
3.1 नीलो जीन्स काम गर्दछ
सारांश अदृश्य केटी
सबै सुरु हुन्छ
शुक्रवार, मई १,, २०१,, युवा आकर्षक उनी आफ्नो लुगा लगाएर लुगा लगाएर बाहिर जाने पोशाक खोज्छन्। एड Sheeran द्वारा "पहाड मा महल": उनको मनपर्ने गीत संग उनको अन्वेषण साथ। त्यो संग वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्नुहोस् मा जो आफ्नी आमा संगै बस्छन्, भेरा। दुबैलाई कठिन समय भएको छ आफ्नो बुबा पछि -बर्नार्ड- तिनीहरूलाई त्याग्नेछन् तीन वर्ष पहिले।
तातो रात थियो आकर्षक उनले अन्तमा के लगाउने थाहा पाउँछिन्, उनको मेकअप मा राख्छिन्, र उनको घडी हेर्न को लागी रोकिन्छ: यो आठ बजेको थियो। जानु भन्दा पहिले, एक WhatsApp सन्देश प्राप्त: "तपाइँ अब आउनुहुन्छ? म लामो समय सम्म बस्न सक्दिन। भर्खरै नौ बजे सम्म। हतार गर्नुहोस् "। चाँडै, उनी आफ्नो चीजहरु लिन्छन् र भेटघाटको ठाउँमा जान्छन्: Rubén Darío संस्थान, जो मात्र कोने वरपर थियो।
अदृश्य केटी: ...
स्कूल मा आइपुग्दा - जो अझै साँझ कक्षाहरु को लागी खुला थियो -, आकर्षक अवलोकन बिना प्रवेश गर्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ। उनी लकर कोठामा जान्छन् तर उनी रोकिन्छन् जब उनी खेल मैदानमा पुग्छन्, एक युवाले बास्केटबल अभ्यास गरे पछि। आदेश मा देख्न को लागी, उनी त्यहाँ बस्न को लागी क्षेत्र स्पष्ट नभएसम्म निर्णय गर्दछ। यस बीचमा, उनी जो कोहि के भयो भनेर व्याख्या गर्न को लागी पर्खिरहेकी छिन् एक व्हाट्सएप पठाउँछिन्, तर उनी एक प्रतिक्रिया पाउँदैनन्।
मिनेट पछि, जवान मानिस छोडिन्छ र आकर्षक तुरुन्तै आफ्नो गन्तव्यमा हिड्नुहोस्। ड्रेसिंग कोठामा प्रवेश गर्दा उनी कसैलाई भेट्दैनन्, सोच्नुहोस् कि शायद तपाइँको मिति अप्रत्याशित केहि थियो। अचानक, उनीहरु ढोका खोल्छन्, ती युवती चाँडै मोडिन्छन्, तर उनको भावना जब उनी आइपुगेको देखीन् फीका भयो। युवती - भयभीत - ठोक्किन्छ र खस्छ, एकै समयमा उनी यी शब्दहरु सुन्छिन्: "नमस्ते, के म त्यो मान्छे होइन जुन तिमीले अपेक्षा गरेका थियौ?"
त्यही रात, जुलिया Uro अरोरा को सहपाठी उहाँ Emilio संग आफ्नो अन्तिम परीक्षा को लागी अध्ययन, यो स्काइप मा एक भिडियो कल को माध्यम बाट। उनीहरु दुबै मिल्ने साथीहरु थिए जब देखि उनी बसाइँ सरे - उनको बुबाको जागिर बाट प्रेरित - सानो शहर मा ३ बर्ष पहिले। बिहानको खाजा को लागी अर्को दिन भेट्न र आफ्नो पढाई संगै जारी राख्न सहमत भए पछि, उनीहरु अलविदा भन्छन् र कल अन्त्य गर्नुहोस्।
जुलिया उहाँ खाना खान तल आउनुहुन्छ, उनकी आमा - Aitana - पिज्जा अर्डर गरीएको थियो। Miguel Ángel, परिवार को बुबा, एक दुर्घटना को बारे मा उनीहरुलाई बताउँछन्। त्यतिबेला ती युवती एक कल प्राप्त गर्दछ अज्ञात; उपस्थित र हुन जान्छ वेरा, कसले सोध्छ हो तिम्रो छोरी अरोरा उनीसँगै छन्.
जुलिया छक्क परे, किनकि यो उनको एक्लो साथी संग सम्बन्धित छैन उनी र एमिलियोले उनलाई अदृश्य केटीको रूपमा वर्गीकृत गरे।
शनिवार को प्रारम्भिक घण्टा मा भेराले आफ्नी छोरी हराएको रिपोर्ट गरिन् र तुरुन्तै मामला सार्जेंट Miguel Ángel, जुलिया को बुबा लाई तोकिएको छ। भोलिपल्ट बिहान, अरोरा को निर्जीव शव संस्थान मा भेटियो, टाउको र उनको छेउमा एक कम्पास को लागी एक बलियो झटका संग। दुखद घटनाले स्कूल र शहर दुबैमा सबैलाई स्तब्ध बनायो।
जुलिया खबर संग धेरै परेशान थिईन्, उनले तुरुन्तै एमिलियो लाई भनिन् कि उनीहरु के भयो भनेर सोधपुछ गर्नु पर्छ। उनी एक अन्तरदृष्टि युवती हुन् र उनको बुबा र आमा दुबै बाट पहिलो हात जानकारी पाउने विशेषाधिकार छ-जो कोरोनर हो। संस्थान मा सबै को साक्षात्कार गरिनेछ, यो जस्तै, बिस्तारै र अरोरा को हत्यारा को जांच गर्दा, आश्चर्यजनक र कालो रहस्यहरु लाई प्रकट गरीन्छ।
विश्लेषण अदृश्य केटी
अदृश्य केटी मा ठाउँ लिन्छ १००० पृष्ठहरू द्वारा विभाजित एक प्रस्तावना, 72२ अध्याय र एक उपन्यास। प्रत्येक भाग छोटो छ, साधारण भाषा र छोटो संवादहरु संग कि धाराप्रवाह र रमाईलो पढ्ने बनाउनुहोस्। इतिहास छ तेस्रो व्यक्ति मा वर्णन र कथानक को बीचमा प्रकट हुन्छ वर्तमान र अतीत को केहि पलहरु, विशेष गरी अरोरा को जीवन को।
त्यो एक जवान महिला हो Years बर्ष जो हाई स्कूल पढ्छन् र बुबाले छोडेको दिनदेखि उनी एक्लो र अन्तर्मुखी भएकी छिन्। उसको व्यक्तित्वले उसलाई साथीहरु बाट रोकेको छ, यसको अतिरिक्त, ऊ धेरै अवसरहरुमा अस्वीकृति र उपहास को शिकार भएको छ। उनी रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ स्कूल मा जहाँ ऊ हाई स्कूल को पहिलो बर्ष मा थियो।
उनी कथाकी नायक हुन्, एक जवान केटी एक काफी उच्च IQ र अविश्वसनीय स्मृति संग अद्भुत बुद्धि को। उनी रहस्य उपन्यासहरु, विशेष गरी अगाथा क्रिस्टी को एक प्रशंसक हो; उनी चेस खेल्न मन पराउँछन् र म्याग्नस कार्लसन को मूर्ति बनाउँछन्। जब तपाइँ अरोरा को हत्या को समाधान गर्न को लागी कोशिश गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको सम्पूर्ण जीवन को सबैभन्दा जटिल पहेली संग सामना गर्नुहुनेछ।
उहाँ एक असामान्य केटा हुनुहुन्छ, उसमा आश्रित सामाजिक व्यक्तित्व। जे होस्, उहाँ हुनुहुन्छ बिल्कुल फरक जब उनी जुलिया संग छ; छन् सबै भन्दा राम्रो मित्र र विश्वासिलो। यद्यपि उनी प्रारम्भमा उनको तरीका बाट आकर्षित भएको थियो, उनीहरुको सम्बन्ध मात्र मैत्रीपूर्ण रहेको छ। Emilio अरोरा को अनौठो मृत्यु को अनुसन्धान मा जुलिया संग, जो उनको पत्रकारिता को वृत्ति जागृत।
मा रोमाञ्चक शिक्षकहरु, बिद्यार्थीहरु र ग्रामीणहरु सहित पात्रहरु को एक किसिम को शामिल हुनेछ। उनीहरु मध्ये Michelangelo बाहिर खडा -प्रहरी हवल्दार इलाका को न्यायिक - र Aitana - फोरेंसिक-, दुबै अरोरा को मामला को प्रभारी।
फ्रान्सिस्को डी पाउला फर्नांडीज गोंजालेज नोभेम्बर,, १7on मा सेभिल मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो युवावस्था कार्मोनामा बस्थे, त्यहाँ उनले सेल्सियानो स्कूल र मासे रोड्रिगो माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे। उहाँले एक कानून को डिग्री संग विश्वविद्यालय शुरू गर्नुभयो, तर केहि महिना मा उनी जान्दथे कि यो उनको पेशा थिएन। उनी सेवानिवृत्त भए, म्याड्रिड गए र युरोपेली विश्वविद्यालय बाट एक पत्रकार को रूप मा स्नातकर उनी खेलकुद क्षेत्रमा विशेषज्ञ थिए.
धेरै अवसरहरुमा उनले एक खेल पत्रकार को रूप मा आफ्नो काम संग विभिन्न मिडिया को लागी सहयोग गरेका छन्। उनी क्लब Deportivo Palestra Atenea को फुटसल टोली मा एक बच्चाहरु को प्रशिक्षक पनि थिए। ती अनुभवहरु पछि, किशोर विधा मा उपन्यास को निर्माण मा विशेषज्ञता, लेखन को लागी आफूलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरे, जो रोमान्स र वर्तमान टेक्नोलोजीहरु सामेल छन्।
2009 मा, स्पेनी लेखक प्रकाशित पाउलाका लागि गीतहरू, उनको पहिलो कथा, जो को रूपमा हस्ताक्षर गरियो नीलो जिन्स Se उपनाम जसबाट उनी आज मान्यता प्राप्त छन्। उनको पहिलो फिचर उही नाम को एक युवा रोमान्स त्रयी शुरू भयो। यी प्रकाशनहरु को सफलता उनको क्यारियर बन्द भयो। तब देखि उसले तीन अतिरिक्त श्रृंखला र उनको अन्तिम स्वतन्त्र उपन्यास, द लिखित छ थ्रिलr: शिविर (2021)।
नीलो जीन्स काम गर्दछ
श्रृंखला पाउलाका लागि गीतहरू:
पाउलाका लागि गीतहरू (2009)
तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई माया गर्छु? (2009)
चुम्बनले मलाई शान्त गर (2011)
श्रृंखला गलतफहमीको क्लब:
शुभ प्रभात राजकुमारी! (2012)
मुस्कुराउनु छैन कि म प्रेममा पर्दछु (2013)
के म तिमी संग सपना देख्न सक्छु? (2014),
मसँग एउटा रहस्य छ: मेरी डायरी (2014)
श्रृंखला केहि धेरै सरल छ:
ट्वीट गर्न को रूप मा केहि सरल म तिमीलाई माया गर्छु (2015)
तपाइँलाई चुम्बन गर्न को रूप मा केहि सरल (2016)
तपाईंको साथ जस्तो केहि सरल (2017)
श्रृंखला अदृश्य केटी:
अदृश्य केटी (2018)
क्रिस्टल पहेली (2019)
जुलियाको प्रतिज्ञा (2020)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » अदृश्य केटी
लियोपोल्डो पनेरो। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। केहि कविताहरु
राफा मेलेरो। संपार्श्विक प्रभाव को लेखक संग साक्षात्कार